ए.जी.एन. महासभा भव्यरूपमा सम्पन्‍न : NepalChurch.com
General Council of Assembly of God Churches, Itahari, Sunsari
इटहरी-एजीएन मण्डलीहरुको हरेक तीन वर्षा हुने महासभा यही २०७४ फागुन २१ गते देखि २४ गते सम्म शालोम एजी आराधना केन्द्र, इटहरी, सुनसरीमा भव्य रूपमा सम्पन्न भयो । महासभाको मुख्य वक्ता चेन्नाईबाट आउनु भएको डा. डि मोहन हुनुहुन्थ्यो । फागुन २१ गतेको दिन महासभामा प्रतिनिधिहरुको आगमनको साथमा दर्ता गर्ने कामसँगै महासभाको उदघाट्न भयो । आगान्तुक सबै प्रनितिधीहरुलाई स्वागत कार्यक्रमसँगै राष्टिय गान गाएर कार्यक्रमको भव्य रूपमा उदघाटन गरियो । पा सुमन गुरुङ्गद्धारा अगुवाई गरिएको उक्त कार्यक्रममा पा धन वहादुर पाण्डेले प्रार्थना गर्नुभएको थियो र पा जोसेफ श्रेष्ठले आगन्तुक सबै प्रतिनिधीहरुलाई स्वागत गर्नुभएको थियो । महासभाको मुख्य वक्ता डा. डि मोहनले परमेश्वरको वचनबाट उत्साहपूर्ण जोशिलो सन्देश बाँडनुभएको थियो । २५६ देशमा एजीएन मण्डली रहेको, एजीएन मण्डलीहरुमा मात्रै ६ करोड ८० लाख भन्दा बढी विश्वासीहरु रहेको विश्वभरी ३ लाख ६७ हजार भन्दा बढी एजीएन मण्डलीहरु रहेको अनि एजीएन मण्डलीहरुचाहिं जागृतिबाट शुरु भएकोले अबको समयमा एजीएन मण्डलीहरु अझ बढी जागृतिका साथ अगाडि बढनु पर्ने कुरा जोड दिनु भयो । कुनै संघ संस्था १०० वर्षपछि घटेर जाने तथ्य रहेको तर एजनीएन मण्डलीहरु विश्वभरी तीव्र रूपमा बढ्ने क्रम अझ जारी रहेको, यो चाहिं पवित्र आत्माको कामले गर्दा यस्तो भएको हो । अब आउने समयंचाहिं जागृतिको दशक र समय हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जोड दिनुभयो । बचनलाई नेपालीमा डा दिलिप क्षेत्रीले अनुवाद गर्नु भएको थियो । महासभाको दोस्रो दिन पा ज्योति कुमार सुनवारद्धारा अगुवाई गरिएको थियो । पा डा डि मोहनले परमेश्वरको वचनबाट आशिषमय सन्देश बाँडनुभएको थियो । त्यसपछि नेपाल ख्रीष्टय समाजको महासचिव डिल्लीराम पौडेलले एजीएन महासभा सफलता पूर्वक सम्पन्न होस भनी शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको लागि प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुभएको थियो । एजीएन अध्यक्ष रेभ पा जोसेफ श्रेष्ठले तीनवर्षअवधिमा के कस्ता कामहरु भए भन्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । एजीएनका सचिव रेभ पा सुमन गुरुङ्गले पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कोष अध्यक्ष रेभ पा लोक वहादुर चौधरीले पनि आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । एजिएन मण्डलीहरु पाँच प्रदेशमा रहेकोले नेपालको नयाँ संविधानले अव सात प्रदेशमा विभाजन गरेकोले एजीएन मण्डलीहरु पनि सात प्रदेशमा जानु पर्ने विधान संसोधन गर्ने कि भन्ने विषय र्सवसम्मतले सात प्रदेशमा जाने भन्ने कुरा पारित गरियो ।
त्यसपछि एजिएन कार्यकारिणी समितिको लागि चुनाव भयो । कार्यकारिणी समितिको छनौट समितिको संयोजकमा डा. वालकृष्ण शर्मा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मताहतमा रहेको समूहले शुरुमा अध्यक्ष पदको लागि चुनाव गरियो । उक्त प्रतिस्पर्धामा २५ जना उमेद्वारहरुमध्ये पा जोसेफ श्रेष्ठ अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभयो । साँझको सेवामा डा डि मोहनले हरेक अगुवा पाष्टरहरु बाइबल अध्ययन गर्ने, चेलापनको चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने कुराको जोड दिनुभयो ।
महासभाको तेस्रो दिन लोक वहादुर चौधरकिो अगुवाईमा शुरु भएको कार्यक्रममा डा डि मोहनले बलियो चरित्र, बलियो परिवार, बलियो मण्डली निर्माण गर्नु भन्ने कुरा जोड दिनु भयो । त्यसपछि चुनावी प्रक्रियालाई अगाडि बर्ढाईयो । उपाध्यक्षको लागि गरिएको चुनावमा रेभ पा लोक वहादुर चौधरी चुनिनुभयो । सचिवको लागि गरिएको छनौटमा रेभ पा ज्योति कुमार सुनुवार छनौट हुनुभयो । कोष अध्यक्षको लागि भएको छनौटमा रेभ पा सुमन गुरुङ्ग विजयी हुनुभयो । सदस्यहरुमा पा नविन सुनुवार र पा भागीराम चौधरी छनौट हुनुभयो । कार्यकारिणी समितिको छनौट प्रक्रिया सकिएपछि नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई छनौट समितिका संयोजक डा वालकृष्ण शर्माले छनौट भएको घाषणा गर्दै बधाई दिनुभयो । नवनिर्वाचित समितिका पदधिकारीहरुलाई डा. डि मोहनले अभिषेक प्रार्थना गर्नुभयो । एजिएन परीक्षामा अभिषेक तहमा सफल हुनुभएका सबैलाई प्रमाण पत्र वितरण गरियो र अभिषेक प्रार्थना गरियो । अन्तिम सेसनमा पा जासेफ श्रेष्ठद्धारा सबैलाई धन्यवाद दिएर प्रार्थनासहित महासभाको विर्सजन भएको घोषणा गर्नुभयो । देशभरीबाट हजारौका संख्यामा आएका मण्डली प्रतिनिधीहरुले महासभा अति नै आशिषित भएको, नयाँ जोश र उत्साह मिलेको बताएका थिए ।
-रेशम कुमार सुनुवार, काठमाडौं।
« पुनरूत्थान तथा इष्‍टर महोत्सव २०७४ राजधानीका चर्चहरुको आयोजनामा हुने
एक उदाहरणीय जिम्मेवारी हस्‍तान्तरण कार्यक्रम »
Vacancy at PURNAA Job Description for:... 128 views | by NC Admin | posted on January 29, 2021